“Permission To Dance” သီချင်းထဲမှာ ခဏခဏပြန်ကြည့်မိတဲ့ချစ်စရာအခိုက်အတန့် (၁၁) ခု | Asia News Bar
“Permission To Dance” သီချင်းထဲမှာ ခဏခဏပြန်ကြည့်မိတဲ့ချစ်စရာအခိုက်အတန့် (၁၁) ခု
BTS ကတော့ “Permission To Dance” ဆိုတဲ့ သီချင်းမြူးမြူးလေးနဲ့အတူ တကမ္ဘာလုံးကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပြန်ပါပြီ။ သီချင်းတစ်ပုဒ်လုံးက နားဆင်သူတိုင်းကို စိတ်ဓာတ်ရွှင်လန်းစေပြီး ခံစားချက်ကောင်း‌တွေ၊မျှော်လင့်ချက်အသစ်တွေမွေးဖွားစေနိုင်တာကြောင့် အားလုံးရဲ့အကြိုက်နဲ့ထပ်တူကျခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့် ဒီသီချင်းသစ်ထဲက ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အခိုက်အတန့် ၁၁ ခုကတော့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းတာကြောင့် ထပ်ခါထပ်ခါပြန်ကြည့်မိတဲ့အထိပါပဲ။
1. RM သီဆိုနေတဲ့အချိန်မှာ အတူတူလိုက်ပြီးစီးမြောခြင်း
အဖွဲ့‌‌ခေါင်းဆောင်ကြီး RM ဟာ သူ့ရဲ့အပိုင်းကိုသီဆိုနေတုန်း ကျန်တဲ့ BTS အဖွဲ့ဝင် ၆ ယောက်ကတော့ အတူတူလိုက်ပြီး စီးမြောနေပါတယ်။
2. သီချင်းနဲ့အတူ အနောက်ဖက်မှာ လိုက်ဒွန့်နေတဲ့ အငယ်ဆုံး Jungkook
Jimin ကတော့ သူ့ရဲ့စာသားတွေကို အလန်းစားကရင်း သီဆိုနေတုန်းမှာပဲ အနောက်ဖက် ကားပေါ်မှာ လှုပ်တုပ်လှုပ်တုပ်နဲ့ကနေတဲ့သူတစ်ယောက်ကို မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဟုတ်ပါတယ်.. သူကတော့ အငယ်ဆုံးလေး ကုကုပါပဲ။
3. တစ်ယောက်ချင်းစီ ခေါင်းလှည့်ကြည့်ခြင်း
RM ကြီးက သီချင်းဆိုရင်း တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ဘေးကနေဖြတ်သွားတဲ့အချိန် ၆ ယောက်စလုံး အလှည့်ကျ လှည့်ကြည့်လိုက်တာကတော့ တကယ်ကို ချစ်စရာပါပဲ။
4. ပူစီဖောင်းလေးတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာဆော့နေတဲ့အခိုက်အတန့်
BTS တစ်ဖွဲ့လုံးက အကုန်လုံး ၂၀ ကျော်ပြီးသား လူငယ်အရွယ်တွေချည်းပါပဲ။ ဒါပေမဲ့လည်း ပူစီဖောင်းတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာကစားနေတာကို မြင်လိုက်ရတော့ တကယ့်ကို ကလေးလေးတွေလိုခံစားရပြီး ကြည်နူးစေမိပါတယ်။
5. အဝတ်လျှော်စက်တွေရှေ့မှာ အုပ်စုလိုက် ဒွန့်ခြင်း
အုပ်စုလိုက် ဘယ်လိုပျော်ရမလဲဆိုတာကို မသိရင် BTS ကို ကြည့်လိုက်ပါ။ အဖွဲ့လိုက်ကြီးရှိနေတဲ့အချိန် ဘယ်နေရာမှာ,ဘာလုပ်ရလုပ်ရ.. မရှက်ဘူးဆိုတဲ့ လူငယ်တွေရဲ့သဘာဝကို ခံစားစေမိတဲ့အထိ အဝတ်လျှော်စက်တွေရဲ့ရှေ့မှာ အုပ်စုလိုက် ဒွန့်နေကြတာပါ။
6. Suga ရဲ့ အနောက်ကနေ ဖျတ်ခနဲထွက်လာတဲ့ Jungkook
စ,စကြည့်နေတုန်းကတော့ Suga တစ်ယောက်တည်းလို့ ထင်ရပေမဲ့ အငယ်ဆုံးလေးကတော့ ပြုံးပြုံးကြီးနဲ့ Suga နောက်ကနေ ထွက်ချလာပါတယ်။ ရင်ခုန်ပြီး ကြည်နူးမိသွားတာတော့ အမှန်ပါပဲ။
7. Jungkook ရဲ့ လက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့အညီ ခေါင်းကို လိုက်လှုပ်နေတဲ့ V
Jungkook လေးရဲ့ လက်လှုပ်ရှားပုံအတိုင်း V ကလည်း မျက်လုံးမှိတ်ပြီး စည်းချက်အတိုင်း ခေါင်းလိုက်လှုပ်တဲ့အခိုက်အတန့်ကတော့ ဘယ်လောက်တောင် အကွက်ကျနေသလဲဆိုရင် ကြည့်လို့ကို မဝတော့တဲ့အထိပါပဲ။
8. ဆိုဖာပေါ်မှာ ခုန်ပေါက်နေတဲ့ Suga
ကျန်တဲ့ ၆ ယောက်စလုံး ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာပဲ ပျော်မြူးပြီး က,နေတဲ့အချိန် အချေဆုံး Suga ကတော့ ဆိုဖာပေါ်တက်ပြီး တမူထူးခြားစွာ က‌,နေခဲ့ပါတယ်။
9. က‌,နေတဲ့အချိန် မျက်လုံးလေးတွေကို မှိတ်ထားခြင်း
BTS အဖွဲ့ဝင်တွေအကုန်လုံး မျက်လုံးလေးတွေမှိတ်ပြီး သီချင်းလေးနဲ့အတူ စီးမြောရင်း က,နေတဲ့အချိန်ကတော့ နားဆင်နေတဲ့သူတွေကိုပါ ခံစားချက်ကောင်းလေးတွေ ရစေနိုင်ပါတယ်။
10. ကလေးလေးတွေရှေ့မှာ ဒူးထောက်ခဲ့တဲ့ Jimin နဲ့ V
BTS တစ်ဖွဲ့လုံး ကလေးတွေကို ချစ်တတ်ပြီး အလေးထားတတ်တာကို Jimin နဲ့ V က ပုံဖော်ခဲ့ပါတယ်။ ကလေးတွေကို ပူစီဖောင်းခရမ်းရောင်လေးပေးရင်း ဒူးထောက်နေခဲ့တဲ့ပုံစံကတော့ သူတို့ကြားမှာ ဆက်နွယ်နေတဲ့မေတ္တာတရားတစ်ခုကို ခံစားမိစေမှာပါ။
11. ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ အတူတူကခြင်း
သီချင်းတစ်ပုဒ်လုံးမှာတော့ ဒီအပိုင်းက အမိုက်ဆုံးဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ Staff တွေအကုန်လုံးက BTS နဲ့အတူ လိုက်ကနေခဲ့တဲ့ပုံစံဟာဆိုရင် စိတ်လက်ပေါ့ပါးပြီး လွတ်လပ်မှုအရသာကို နှလုံးသားထဲမှာ ခံစားမိစေပါတော့တယ်။
Next ချမ်းသာတဲ့သူ​​တွေမှာသာရှိတဲ့ Black Credit Card ကို ကိုင်​ဆောင်ထားကြတဲ့ K-Pop Idol များ »
Previous « အသက် ၃၀ ကျော်လို့တောင် မထင်ရ​က်စရာကောင်းလောက်အောင် နုပျိုချောမောနေကြတဲ့ Kpop idol (၇) ယောက်
ရီလို့မဆုံးနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ အနာဂတ် JungKook ဆီက အကြားချင်ဆုံး စကားလေးတစ်ခွန်း
အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်း​တွေက ​ပြောပြတဲ့ G-Dragon နဲ့ Jennie တို့ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဆက်ဆံ​ရေး
J-Hope ရဲ့ စကားကြောင့် မျက်ရည်ကျခဲ့ရတဲ့ V ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်